Samachar Batika || News from Nepal » दाम्पत्य जीवनमा फाटो ल्याउने ७ भ्र’महरु
दाम्पत्य जीवनमा फाटो ल्याउने ७ भ्र’महरु
दम्पतीबीच किन ठा’कठुक पर्छ ? के निहुँमा उनीहरुबीच म’नमुटाव हुन्छ ? कुन कारणले दाम्पत्य सम्बन्धलाई ध’रापमा पार्छ ?
खासमा यसका लागि श्रीमान–श्रीमतीले गर्ने एकअर्काप्रतिको अपेक्षा वा बुझाई जिम्मेवार छ । भनिन्छ नि, विवाह भनेको स’म्झौता हो । दाम्पत्य जीवनमा आपसमा धेरै कुरा स’म्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै कुरा आफुले भनेजस्तै, सोचेजस्तै ठीकठाक नहुन सक्छ । आफुले अपेक्षा गरे अनुरुपका कुराहरु प्राप्त नहुन सक्छ । जब हामी यी सामान्य कुराहरुलाई बेवास्ता गर्छौं, तब दाम्पत्य सम्बन्धमा फा’टो आउँछ । अतः दम्पतीबीच एकअर्कामा कस्तो धारणा र अपेक्षा हुन्छ, जसले उनीहरुको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउँछ ?
व्यक्त नगरे पनि आफ्ना कुरा पा’र्टनरले बुझ्नेछन्
वास्तविकताः व्यक्त नगरिकन मनको कुरा बुझ्ने जीवनसाथी त फिल्मको पर्दामा वा उपन्यासको पानामा मात्रै हुन्छन् । आफ्नो इच्छा, आवश्यकता, अपेक्षालाई खुलेर बताएपछि मात्रै पा’र्टनरले त्यो तपाईंले सम्झाउन चाहे अनुसार नै बुझ्न सक्छन् ।
त्यस्तै बुझेपछि पनि त्यसलाई पुरा गर्नै पर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले जीवनसाथीलाई आफ्नो भावना, इच्छाहरुको बारेमा बताउनुपर्छ । सम्बन्धमा त’नावमुक्त रहने एकमात्र माध्यम संवाद हो र कुरा नगरि एकअर्काको मनको कुरा केही पनि थाहा हुँदैन भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात गरौं ।
वास्तविकताः सबैको क्षमता, खुबी एकनास हुँदैन । सबैले समान ढंगले काम गर्न सक्दैन । तर, कतिपय श्रीमान वा श्रीमती सोच्छन् कि आफुले जस्तै पा’र्टनरले पनि काम गर्नुपर्छ । पा’र्टनरको काम गर्ने ढंग, सीप आफ्नो जस्तै पूर्ण हुनुपर्छ । यस किसिमको धारणा आफैमा गलत हो ।
व्यवहारिक एवं घरेलु कामहरुलाई बराबर बाँड्नु कहिलेकाँही व्यवहारिक हुदैन ।
पा’र्टनरलाई हरेक दुःख बताउनु हुँदैन
वास्तविकताः दुःखसँग एक्लै ल’ड्न मु’स्किल हुन्छ । साथै मिलेर मात्रै कुनै पनि समस्याको हल खोज्न सकिन्छ । विवाहमा सेयरिङ जरुरी छ र यो सोयरिङ सुख दुःखमा समान रुपले हुनुपर्छ ।
केही खास कुरा स्थितीमा पा’र्टनरलाई हरेक कुरा भन्न सकिँदैन । तर, सकेसम्म आफ्नो समस्याहरु पा’र्टनरलाई भन्नुपर्छ । त’नाव, रोग वा कुनै व्यावसायीक समसयाबाट जु’धिरहेको बेलामा सेयरिङले सम्बन्ध मजबुत हुन्छ ।
त्यस्तै दाम्पत्य जीवनको समस्याहरु कुनै तेस्रो व्यक्तिसँग गर्दा भने सतर्क हुनुहोस् । पा’र्टनरको करियर वा आर्थिक पक्षसँग जोडिएका कुनै समस्या अरु मानिसहरुसँग नगर्नुहोस् ।
पार्ट’नरलाई उसको गल्ती बताएर त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ
वास्तविकताः पा’र्टनरको गल्ती अवश्य बताउनुहोस् तर सँधै खो’ट लगाउने वा दो’ष दिने नगर्नुहोस् । सकरात्मक आ’लोचनाबाट मात्रै अरुको गल्तीलाई सुधार्न सकिन्छ । संवादबाट चीजहरु बदलिन्छन् ।
आ’लोचना गर्दा पा’र्टनरको राम्रो कुराहरु भन्न चैं नभुल्नुहोस् । आ’लोचनाको सही तरिका यहि हो । तपाईंको लक्ष्य जीवनसाथीलाई नी’च देखाउने होइन बरु उनीहरुको गल्ती कमजारीलाई सुधार्ने हुनुपर्छ ।
भावना नभई पा’र्टनर प्रति प्रेम पनि दर्शाउन सकिँदैन
वास्तविकताः विवाहले सिकाउने एक पाठ यो पनि हो कि कहिले काहीँ पा’र्टनरको लागि आफूलाई मन नलागेको कुरा पनि गर्नुपर्छ । कहिलेकाँही फिलिंग्स आँउदैन तर सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनको लागि तपाईंले आफ्नो रुची नभए पनि उनीहरुले भनेको मान्नुपर्छ ।
पा’र्टनरको व्यवहार, बानी वा कुनै कुराले चित्त दु’खाएको छ भने पनि कहिले काहीँ आफूले त्या’ग गर्नुपर्छ । प्रेम पाउनको लागि पहिले प्रेम दिनुपर्छ । सकरात्मक व्यवहार गरेमा मात्रै पा’र्टनरको मनमा पनि स्नेह जाग्छ । र, परिणामस्वरुप तपाईंको मनमा पनि उनीप्रति फिलिंग्स पैदा हुन्छ ।
वास्तविकताः केही जोडीहरुलाई देखेर उनीहरु एक अर्काको लागि नै बनेका हुन् जस्तो भावना पैदा हुन्छ । उनीहरुको मित्रता देखेर कतिपयले इ’ष्र्या पनि गर्छन् तर मित्रता मात्रैले पनि विवाह सफल हुँदैन ।
आफुले अपेक्षा गरे अनुरुपका कुराहरु प्राप्त नहुन सक्छ । जब हामी यी सामान्य कुराहरुलाई बेवास्ता गर्छौं, तब दाम्पत्य सम्बन्धमा फा’टो आउँछ ।
प्रकाशित मिति १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ११:००